Fiaraha-monina - Fiaraha-monina, Kômonisma, Sôsialisma, Mari
ⓘ Fiaraha-monina - Fiaraha-monina, Kômonisma, Sôsialisma, Maritrano, Barack Obama, Kary, Fanambadiana, Mofo, Fanabeazana, Aretina, Ushkonyr, Fampielezan-kevitra ..
Ny fiaraha-monina dia ny teny hamaritana ny olombelona miaina. Noho izy tsy maintsy mampitehanampy ireo tena mahery sy manan-karena ireo mahantra, tena zava-dehibe aminny fiaraha-monina ny zom-pirenena, zo sy ny fotoana voafetra. Ireo no fototra fomba hahazoana rariny. Raha mirava ireo dia manomboka mihevitra fa tsy rariny ilay fiaraha-monina ary manomboka mifangalatra, tsy manaiky mifanampy, na manomboka mijery ireo mpanana noho tena fa mangalatra. Na dia samihafa aza ny fiaraha-monina tsirairay, mitovitovy ny fomba firavany: hosoka, halatra, herisetra, ady na vonom-poko raha tsy mahita n ...
Ny kômonisma dia rafi-pitondrana sôsialista izay tsy ahitana fanjakana, vola na sokajy ara-tsosialy, ary mampiombona ny fitaovam-pamokarana. Izy io koa dia fomba fieritreretana ara-politika iray ary hevitra aminny fomba fananganana fiaraha-monina tahaka izany. Ny kômonisma dia milaza fa tokony anananny olon-drehetra ny ozinina ary ny tanim-boly hanaovana entana na sakafo hohanina. Ny fizotra ara-tsosialy dia fantatra aminny fananana iombonana. Ny fahasamihafananny sôsialisma sy kômonisma dia, ao amina fiaraha-monina kômonista, tsy misy ny fanjakana na vola. Ny asa dia tsy zavatra natao hov ...
Ny sosialisma dia rafitra ara-toekarena sy ara-politika izay ahitana mpiasa mifehy ny fomba famokarana, toy ny milina, na toeram-pambolena, aminny toeranny mpampiasa. Ireo olona izay manohana izany fiaraha-monina miara-miasa izany dia antsoina hoe sosialista. Ny finoana manan-danja iray dia hoe tokony natao ho anny fampiasanny vahoaka fa tsy natao hahazoan-tombony ara-bola ny famokarana servisy sy fitaovana. Ny sosialista dia mino ihany koa fa ny zavatra rehetra aminny fiaraha-monina dia nataonny asa miaraky ny vahoaka. Misy karazany maro ny sosialisma, ka tsy misy famaritana azo ampiharin ...
Ny Maritrano na Arsitektiora dia mety midika ny taozavatry ny fanamboarana trano. ary ny fanorenana anatiny dia ny zavakanto sy ny siansa aminny fanatsarana ny atinny tranobe iray mba hahazoana tontolo mahasalama sy mahasalama kokoa ho anny olona mampiasa ny toerana.
Teraka taminny 4 Aogositra 1961 tany Honolulu, any Hawai, filoha faha-44 ani Etazonia i Barack Obama. Zanaka Kenianina mainty sy amerikanina fotsy avy any Kansas, i Barack Obama ny filoha afrô-amerikanina voalohany indrindra any Etazonia. Ary nanatanteraka ny nofinofini Martin Luther King izy.
Biby mampinono ny kary, iray tarika aminny saka, sady saka dia. Sokajiana ho biby ratsy ny kary eo aminny fiaraha-monina malagasy noho izy biby namanny mpamosavy izay entiny mivoaka alina miaraka aminny vorondolo. Entina hanompana olona, na koa sangim-piteny eo aminny olona mpifankafantatra tsara ny hoe "Ilay karilahy ity". Azo tarafina aminny ohabolana sy ohapitenenana miresaka momba ny kary izay fanasokajiana ratsy azy izay.
Ny fanambadiana dia firaisana eo aminny olona tsirairay. Izany dia toy ny fifanarahana. Indraindray koa miantso izany fanambadiana ny olona. Matetika, mankalaza ny fanambadiany ny olona. Ny lanonana dia matetika antsoina hoe fampakaram-bady.
Ny mofo dia ny sakafo ho anny fiaraha-monina maro: Vita koba, sira sy rano izy. Rehefa manampy ny holatra kavingy, ilay paty dia lasa mibontsina aminilay fivadihana ho mavingy. Lasa roatra mafy ilay izy. Rehefa tsy ampina holatra kavingy, lasa hoe azima ilay mofo.
Ny fanabeazana dia fampianarana ny fahaizana. Izy io koa dia fanampiana ny olona mianatra ny fanaovana zavatra ary mamporisika azy hieritreritra mikasika ny zavatra ianarany. Zava-dehibe ho anny mpanabe ny mampianatra ny fomba fahitana ary fampiasana ny fampahalalana. Ampitaina aminny alalanny fanabeazana ny fahaizanny firenena, fikambanana ary fiaraha-monina iray. Aminny firenena demokratika, anisanny tanjonny fanabeazana ny fampianarana ho olom-pirenena mahavokatra.
Ny aretina dia fanimbana ny fahasalamananny zava-miaina, na biby na voninkazo. Ny olona marary dia olona mitondra aretina, na fantatra na tsia. Aminny ankapobeny, io teny io dia ampisaina rehefa manonona olombelona marary, ary io ihany ny teny ampiasaina rehefa tsaboinny dokotera izy. Ao aminny fiainana ny aretina sy ny fahasalamana, ny fizotra biôlôjika sy ny fiasa mifamaly aminny fiaraha-monina sy aminny tontolo iainana.
Ushkonyr dia fiaraha-monina ambanivohitra akaikinny Almaty ao Kazakhstan. Izany no malaza aminny maha-toerana nahaterahani aminizao fotoana izao Kazakh ny filoha Nursultan Nazarbayev
Ny fampielezan-kevitra dia ny fampahafantarana ny hevitra amin’ny alalan’ny fampiasana ny fitaovana fampielezana toa ny haino aman-jery, ny onjam-peo, ny fahitalavitra sns. Ampiasain’ny mpanao politika amin’ny fotoam-pifidianana izy io na koa ampiasain’ireo orinasa na fikambanana mba hanintona ireo mpanjifa na hampirisika ny olona hanao fanomezana.
Ny fandriampahalemana dia fotoana tsy misy ady. I Alfred Nobel dia namorona loka isan-taona, ny Loka Nobel ny Fandriampahalemana, ho an’ny olona izay efa nanao ezaka betsaka indrindra hitondrana fiadanana ho anizao tontolo izao.
Ny ray aman-dreny dia ny ray ary ny reny manabe ny olona na iray. Amin’ny lafiny ara-dalàna izy ireo dia afaka manangana zaza iray ary araka izany dia afaka antsoina ray aman-dreny ihany koa.